महजोडीको नामाकरण गरिदिने पौडेलको उमेर १६ वर्ष की ६१ वर्ष ? | Jukson
हाँस्यकलाकार राजाराम पौडेल पुस १५ बाट ६१ औँ वसन्त मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडिको नाम मह भनेर नामाकरण गर्ने पण्डित पौडेल काठमाण्डौँको नक्सालमा जन्मीनुभएको हो । नेपाली सिनेमा‘बासुदेव’बाट सिने नगरीमा प्रवेश गरेका राजारामले सयौँ नाटक, दर्जनौँ टेलिफिल्म र सयको हाराहारीमा ठूला पर्दाका सिनेमामासमेत कामगरिसक्नु भएको छ ।
पर्दामा साह्रै रमाइलो र उट्पट्याङ गर्ने पौडेल वास्तविक जीवनमा पनि असाध्यै रसिक र रमाइला हुनुहुन्छ । पौडेलले पछिल्लो पुस्ताका चर्चित जोडी आँचल शर्मा र पल शाहको नामाकरण गरेर आँप राखिदिनु भएको छ । जुन दर्शकहरुले रमाइलो मानेका छन् । उहाँको उमेर जती बढ्दै गयो व्यस्तता पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ । उहाँ यतीबेला एकसाथ ७ वटा चलचित्रमा काम गरिरहनु भएको छ । जन्म दिनको दिनपनि‘बाँधमायाले’नामक चलचित्रको छाँयांकनको क्रममा नवलपरासी पुगेका पौडेलसँग हामीले जन्म दिनको अवसरमा गफगाफ गरेका छौँ ।
जन्मदिनको अवसरमा के–के गर्नुभयो ?
बिहान नुहाई धुवाई गरेर बसे । यहाँ के रमाईलो रहेछ भने त्रिवेणीको होटलमा तातो पानीको व्यवस्था रहेन छ । चिसो पानीले नुहाउनुपर्ने रहेछ । नुहाएर पूजापाठ गरे । सामाजिक सञ्जाल र फोनमा साथीभाईको शुभकामना शुभेच्छा पाएँ ।
सेटमा कसैले जन्म दिन भनेर सरप्राइज दिए की दिएनन् ?
मेरो सिन थिएन । त्यसैले होटेलमा खाना खाएर बसेको थिए । खाना पनि खाईसक्नु अनि दाई हजुरको सिनहुने भयो भनेर फोन आयो । त्यो पछि लुगा लगाएर छायाकंन स्थलमा गए । तर, त्यो दिन मेरो छायांकन भएन । कसैले सरप्राइज पनि दिएन (लामो हाँसो) ।
हिजोको दिनमा क–कसले कसरी जन्म दिनको शुभकामना दिनुभयोे ?
फेसबुकमा भने धेरैले शुभकामना र आर्शिवाद दिनुभयो । हाम्रो युनिटको पनि धेरैले थाहा पाएर बेलुका शुभकामना दिनुभयो । पार्टी र केक काट्ने कुरो भने म काठमाडौं नै भएको बेलामा पनि हुँदैन । काठमाडौँ नै हुदाँ पनि म मन्दिर जाने गर्छु । केक काट्ने चलन भने छैन । त्यो हाम्रो कल्चर पनि होइन । बरु के काट्नु भन्दा कुभिण्डो काट्नु राम्रो (लामो हाँसो)।
कति वर्षको पुग्नु भयो?
म हिजोबाट ठ्याक्कै १६ वर्षको पुगे (लामो हासोँ) । तर, अंक उल्टो पुल्टो गर्नु पर्छ है (हाँसो) ।
कुन सिनेमाको सुटिङ्गमा हुनुहुन्छ?
“बाँध मायाले” भन्ने सिनेमाको सुटमा छु । सिनेमाको हिरो आर्यन अधिकारी र हिरोइन श्रृटी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँले भने आफ्नो भागको काम सकेर जानुभयो ।
६०औँ वर्षमा तपाइको दुई ब्लक बस्टर सिनेमा‘प्रेम गीत–२’ र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ आए । त्यो बाहेक त्यस्तो खास के भयो ?
मेरो उमेरको पछाडि सुन्ना भए पनि यो सुन्नाले मलाई गज्जबको फलिफाप गरेको छ । अहिले घरमा बस्न सुन्ना लागेको छ । बाहिर बाहिर नै छु । सुटिङ्गको कामलाई लिएर । नवलपरासीमा पनि भोलि चालिस दिन पुरा हुन्छ । वर्षको पछाडि सुन्ना भएपनि हात लागे सुन्ना भने भएको छैन । फागुनमा पनि मेरो एकैचोटी सिनेमा जुधेको छ । कुन गर्ने कुन नगर्ने भनेर छुट्याउन गाह्रो भईरहेको छ । अशोक शर्मा सँग त पैँसा लिइसके । अब उसको सिनेमामा त काम गर्नै पर्यो ।
अब आउने वर्षमा तपाइका कतिवटा सिनेमा रिलिज हुन्छन् होला ?
खुरु–खुरु सुटिङ्ग हुने हो भने त पाँचवटा सिनेमा अहिले नै छ । यही आएको बेलामा पोखरा गएर तीन दिनको सुट सकाएर आए ‘अनुराग’ को पनि । शिव श्रेष्ठले नयाँ सिनेमा बनाउदै हुनुहुन्छ । त्यो पनि लाएर चार वटा, अशोक शर्माको पाँच वटा, राम शरण पाठकको ६ वटा पुग्यो । मैले झण्डै सात वटा त यही माघ फागुनमा नै गरे । अहिले त मलाई बोकाको मुखमा कुबिन्डो हालिदिएको झै भएको छ । न निल्नु न ओकल्नु (लामो हासोँ) ।